Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း)
Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) ကဘာလဲ။
အမျိုးသားများအသက်ကြီးလာသောအခါ ကျားဟော်မုန်း (testosterone) လျော့နည်းလာခြင်းကိုခေါ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အချိန်ကာလတိတိကျကျတစ်ခုတွင် သွေးဆုံးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကျားဟော်မုန်းလျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် အချို့ဆရာဝန်များကကျားဟော်မုန်းပမာဏနည်းသွားခြင်းဟုလဲခေါ်ကြပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အသက်ကြီးလာမှသာကျားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတတ်သော်လဲဆီးချိုကဲ့သို့သောရောဂါများဖြစ်လျှင်လဲကျားဟော်မုန်းလျော့နည်းလာတတ်ပါသည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကျားဟော်မုန်းပမာဏကျဆင်းလာပါသည်။
Mayo ဆေးခန်း၏တွေ့ရှိချက်အရအမျိုးသားအများစုသည် အသက် ၂၀ကျော်အရွယ်တွင် ကျားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီးအသက် ၃၀/၄၀ ကျော်လာလျှင် ကျားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁% လောက်ကျဆင်းသွားပါသည်။
အသက် ၇၀ လောက်ရောက်လျှင် ကျားဟော်မုန်းပမာဏသည် ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးအချိန်ကပမာဏ၏ ၅၀% လောက်သာကျန်ပါတော့သည်။ ထိုသို့ ဟော်မုန်းပမာဏအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်းသည် အမျိုးသမီးများသွေးဆုံးခြင်းနှင့် ခြားနားချက်များစွာရှိပါသည်။
Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်ကြီးသောအမျိုးသားများတွင် ပိုအဖြစ်များပါသည်။ သွေးဆုံးခြင်းပိုမိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သောအကြောင်းရင်းများကိုလျှော့ချခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရင်သားများဖောင်းလာ၊ နာလာခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါသေးသွားခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်ရှိအမွှေးများနည်းသွားခြင်း၊ ပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုလဲခံစားရနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်းသည် ကျားဟော်မုန်းနည်းသွားခြင်းကြောင့် အရိုးပွခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်နေပါသည်။
အရိုးပွခြင်းဆိုသည်မှာအရိုးများအားနည်းပြီးကြွတ်ဆတ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်များကတော့ တွေ့ရနည်းပါသည်။
အမျိုးသမီးများသွေးဆုံးသည့် အသက်အရွယ်လောက်မှစ၍ အမျိုးသားများလဲထိုလက္ခဏာများကိုစတင်ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။
အထက်ဖော်ပြချက်များတွင်မပါဝင်သောလက္ခဏာများလဲရှိနိုင်ပါသည်။ လက္ခဏာတစ်ခုခုခံစားရပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
အထက်ပါလက္ခဏာတစ်ခုခုခံစားရပါကသို့မဟုတ် သိလိုတာတစ်ခုခုရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
လူတို့၏ခန္ဓါသည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တည်ဆောက်ပြုမူပုံခြင်းမတူကြပါ။
Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာကျားဟော်မုန်း (testosterone) လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကျားဟော်မုန်းလျော့နည်းသွားပြီးသွေးထဲရှိအသုံးပြုနိုင်သောကျားဟော်မုန်းများကိုဝင်ပေါင်းလိုက်သည့် ဟော်မုန်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည့် sex hormone binding globulin (SHBG) ပမာဏကများလာပါသည်။
SHBG သည် သွေးထဲတွင်လှည့်ပတ်နေသောအသုံးပြုနိုင်သည့် လွတ်နေသောကျားဟော်မုန်း (testosterone) အချို့ကိုဝင်ပေါင်းလိုက်ပါသည်။
SHBG မပေါင်းထားသောကျားဟော်မုန်းကို (bioavailable testerone) ခန္ဓါကိုယ်ကအသုံးပြု၍ရသောကျားဟော်မုန်းဟုခေါ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျားဟော်မုန်းလူံ့ဆော်မှုလိုအပ်သည့် ခန္ဓါကိုယ်အချို့နေရာများတွင် ကျားဟော်မုန်းရရှိမှုနည်းသောကြောင့် စိတ်ကယောက်ကယက်ဖြစ်ခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းစသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
သို့သော် ထိုလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ကျားဟော်မုန်းလျော့နည်းခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှုရှိနေခြင်းမှာအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများသွေးဆုံးသောအခါ မဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုလုံးဝရပ်သွားသော်လည်းအမျိုးသားများတွင်မူကျားဟော်မုန်းကတစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏သားဥအိမ်နှင့်မတူပဲအမျိုးသားများ၏ဝှေးစေ့ သည် ကျားဟော်မုန်းထုတ်ရာတွင်သုံးသည့် ပစ္စည်းများကုန်ဆုံးသွားခြင်းမရှိပါ။
ကျန်းမာသောအမျိုးသားတစ်ယောက်သည် အသက် ၈၀ကျော်အထိ သုတ်ပိုးထုတ်လွှတ်နိုင်ပါသည်။
Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အမျိုးသားများအရွယ်မတိုင်ခင် သွေးဆုံးခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် မဟော်မုန်း (estrogen) ထိတွေ့မှုများခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်သန့်စင်ထားသောရေသောက်သုံးသူများ၊ မီးသဂြိၤုလ်စက်နားတွင်နေထိုင်သူများ၊ဆေးဝါးစက်ရုံများတွင်အလုပ်လုပ်သူများ၊ပလတ်စတစ် နှင့် ဆိုးဆေးအစရှိသည့် ဓါတုပစ္စည်းစက်ရုံများအနီးတွင်နေထိုင်သူများ၊ပိုးသတ်ဆေးနှင့် အခြားဓါတုဆေးများအသုံးပြုထားသည့် လယ်ယာများတွင်နေထိုင်သူအမျိုးသားအမျိုးသမီးများတွင် မဟော်မုန်းပမာဏများနေတတ်ပါသည်။
အရက်သောက်သူများအထူးသဖြင့် အမြဲတမ်းနှင့် အလွန်အကျွံသောက်သူများ
စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးများ၊ပိုးသတ်ဆေးများ (ဥပမာ – erythromycin)။ မှိုရောဂါပျောက်ဆေးများ (ketokonazole)၊ သွေးတိုးရောဂါအတွက်ဆေးများ (beta blockers)၊ ဆီးဆေးများ၊ကိုယ်ခံအားချသည့်ဆေးများ၊
စိတ်ရောဂါအတွက်ဆေးများ၊ကင်ဆာရောဂါအတွက်ဆေးများ နှင့် မဟော်မုန်းကဲ့သို့အာနိသင်ရှိသည့် ကလေးမရနိုင်သူတို့အတွက်ပေးသည့်ဆေးများ
မွေးရာပါကျားဟော်မုန်းလျော့နည်းစေသောမျိုးရိုးဗီဇရောဂါများ ( Klinefelter’s, Wilson-Turner’s and Androgen insensitivity syndromes)
Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဥပမာ – hypogonadism (မျိုးပွားအဂါၤများကောင်းစွာမဖွံ့ဖြိုးခြင်း)၊ဆီးချိုရောဂါ၊သွေးတိုးရောဂါ
သင့်ဆရာဝန်သည် ထိုအချက်များကိုပယ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးသောအချက်မှာအမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း၏ လက္ခဏာအများစုသည် အသက်အရွယ်ကြီးလာခြင်း၏ သာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆေးဝါးကုသ၍လဲမရနိုင်ပါ။
Andropause (အမျိုးသားများသွေးဆုံးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သွေးအတွင်းကျားဟော်မုန်းအစားထိုးပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းခြင်းသည် အမျိုးသားသွေးဆုံးခြင်းများတွင် အများဆုံးပြုလုပ်သောကုသမှုဖြစ်သည်။
ထိုသို့ကုသခြင်းဖြင့် အများစုတွင် ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေနိုင်ပြီးဘဝအရည်အသွေးပြန်လည်တိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများတွင် ဟော်မုန်းအစားထိုးခြင်းကဲ့သို့ပင်ကျားဟော်မုန်းအစားထိုးကုသခြင်းတွင်လဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် ကျားဟော်မုန်းအစားထိုးကုသခြင်းသည် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။
ကျားဟော်မုန်းအစားထိုးကုသရန် စဉ်းစားမည်ဆိုပါကအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးအကျိုးအပြစ်များကိုချိန်ဆပြီးမှ ကုသရန်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်။
ကျားဟော်မုန်း (testosterone) ကိုအရေပြားကပ်ခွာများ၊ ဆေးတောင့်များ၊ ဂျယ်လ်များ၊ထိုးဆေးများစသည်ဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ဆရာဝန်ကသင်မည်သည့်ကုသမှုဖြင့် ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်သောဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတို့ကိုကူညီဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
ကုသမှုစတင်ပြီးသည့်နောက်တွင် ဆရာဝန်နှင့်ပုံမှန်ဆက်လက်ပြသရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဆက်လက်ပြသမှသာသင့်ဆရာဝန်ကတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေး၍ လိုအပ်လျှင်ကုသမှု ပြန်လည်ချိန်ဆနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
အရေပြားကပ်ခွာများ : ကျားဟော်မုန်းပါဝင်သောကပ်ခွာကိုကပ်ခြင်းဖြင့် အရေပြားမှတစ်ဆင့် ကျားဟော်မုန်းများဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကပ်ခွာများသည် ကျားဟော်မုန်းကိုဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန် သွေးထဲသို့ထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။
ထိုကပ်ခွာကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ် ကျောကုန်း၊ ဗိုက်၊လက်မောင်းနှင့် ပေါင်တို့၏ ခြောက်သွေ့သောအရေပြားပေါ်တွင် ကပ်နိုင်ပါသည်။
testosterone ဂျယ်လ် :ထိုဂျယ်လ်ကိုလဲအရေပြားပေါ်တွင် အများအားဖြင့် လက်မောင်းတွင် လိမ်းနိုင်ပါသည်။
ထိုဂျယ်လ်သည် အရေပြားခြင်းထိတွေ့မှုဖြင့် အခြားသူတစ်ယောက်ဆီရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့် ဂျယ်လ်ကိုလိမ်းပြီးတိုင်းလက်ပြန်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးတောင့်များ: အခြားကျားဟော်မုန်းအစားထိုးကုသခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအစာစားပြီးတစ်နေ့နှစ်ကြိမ် သောက်ရပါမည်။
အသည်းရောဂါရှိသူများ၊အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာမကောင်းသူများ၊ ပြင်းထန်သောနှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများ၊သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်များနေသူများကျားဟော်မုန်းဆေးတောင့်ကိုမသောက်သုံးသင့်ပါ။
ကျားဟော်မုန်းထိုးဆေး :ကျားဟော်မုန်း (testosterone cypionate* နှင့် testoateroneenanthate) ကို၂ ပတ်မှ ၄ ပတ် အတွင်း ကြွက်သားထဲသို့ပုံမှန်ထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သောနှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများ၊သွေးတွင်းကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ်များနေသူများ testosterone cypionateကိုရှောင်သင့်ပါသည်။
ပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများ testosterone enanthateကိုရှောင်သင့်ပါသည်။
နှလုံးရောဂါရှိသူ၊သွေးကျဲဆေးကဲ့သို့သောဆေးများသောက်နေရသူ၊ ဆီးကျိတ်ကြီးနေသူ၊ကျောက်ကပ်ရောဂါ အသည်းရောဂါရှိသူတို့သည် ကျားဟော်မုန်းဖြင့်ကုသရန်သင့် မသင့်ကိုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
သင်စိတ်ကျခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရပါကဆရာဝန်သည် စိတ်ကျရောဂါကုသသောဆေးများပေး၍ နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲရန် အကြံပေးပါလိမ့်မည်။
သိလိုသည်များရှိပါကပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းကုသနိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Male Menopause. http://www.webmd.com/men/guide/male-menopause. Accessed October 19, 2016.
What Is Male Menopause?http://www.healthline.com/health/menopause/male#Overview1. Accessed October 19, 2016.